နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ဆုလေးဆု ရရှိထားသည့် ''မဟူရာရုပ်ရှင်ရုံ'' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား မကြာမီ ရုံတင်မည?? - Yangon Media Group
နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ဆုလေးဆု ရရှိထားသည့် ”မဟူရာရုပ်ရှင်ရုံ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား မကြာမီ ရုံတင်မည??
သရုပ်ဆောင် နေတိုး၊ ကျော်ကျော်ဗိုလ်၊ မင်းသွေး၊ နန်းဆုဦး၊ အိန္ဒိယသရုပ်ဆောင် ရီရာရေးတို့ အဓိကပါဝင်သရုပ် ဆောင်ထားသည့် ”မဟူရာရုပ်ရှင်ရုံ” Horror ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ဧပြီ ၂၅ ရက်တွင်ရုံတင်ပြသသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းဇာတ်ကားတွင် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အိန္ဒိယသရုပ် ဆောင် ရီရာရေးက ” ဒီဇာတ်ကား ကို ရိုက်ဖြစ်တာကတော့ ဒါရိုက်တာ ပြည့်ဇော်ဖြိုးက ကိုယ့်ကို မော်ဒယ်တစ်ယောက်အဖြစ် မမြင်ဘဲ သရုပ် ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ် ကမ်းလှမ်းခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
သရုပ် ဆောင်ကိုနေတိုးက အင်မတန်နူးညံ့တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုကျော်ကျော်ဗိုလ်ကကျတော့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့သူ၊ အကောင်း မြင်တတ်တဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ နန်းဆုဦးကလည်း ညီမလေးတစ်ယောက်လိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုမင်းသွေးရဲ့သတင်းကို ကြားတဲ့အချိန်တုန်းက အင်မတန်မှ တုန်လှုပ်မိပါတယ်။နောက်ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အမှတ် တရဖြစ်တာကတော့ ကိုယ်က အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကိုးလ်ကတ္တားမြို့မှာမွေးတယ်။ ကိုယ့်ဇာတိမြို့မှာ ဒီဇာတ်ကားက ဆုရတယ်ဆိုတော့ အရမ်းကို ဝမ်းသာရပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
ယင်းဇာတ်ကားမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကိုးလ်ကတ္တားမြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲ တော်တွင် ဆုပေါင်းလေးဆုကို ရရှိခဲ့ပြီး သရုပ်ဆောင် နေတိုးက The Best Actor ဆုရခဲ့ပြီး အသံပိုင်းဆိုင်ရာဆု၊ ဒါရိုက်တာဆုနှင့် The Best Horror ဆုတို့ကို ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အတွက် သည်းခံမှုမရှိခြင်း ပိုမိုတိုးလာဟု ?
''ဒီဇာတ်ကားက ဒီဘက်ခေတ်မှာ ကြည့်ရဖို့ရှားပါးတဲ့ ဇာတ်ဖြစ်သလို သရုပ်ဆောင်တွေ အတွက်လည်း သရုပ်ေ?